Varatra nitety efitrano tany Antsirabe Mpianaka 2 maty, olona 2 hafa naratra mafy
Namono olona indray ny varatra raha mba vao nilatsaka ny orana tao Antsirabe manodidina.
Fanomezana taratasy ara-panjakana Hiatrika fanovana goavana i Madagasikara
Zava-dehibe ho eo amin’ny fiainan’ny olona iray ny fanoratana ny anarany eo am-pahaterahana, ny fahazoany kopia ary ny fananana ny kara-panondro rehefa feno taona.
Berija R sy ny depiote Tsivoulagne Maximin Raikitra ny ampamoaka sy ady…
Raikitra ny fifanolanana eo amin’i Berija Ravelomanantsoa, Lehiben’ny fari-piadidiam-paritry ny jono ao Sainte Marie sy ny depiote Tsivoulagne Maximin.
Zon’ny ankizy teny amin’ny boriborintany faha-6 Naompana tamin’ny lafin-javatra 3, hoy ny depiote Horace
Nomarihana ny alatsinainy 20 novambra toy ny isan-taona ny andro maneran-tany ho an’ny ankizy hatramin’ny nanamarihana azy voalohany tamin’ny taona 1954 mba hanamafisana ny fanajana azy ireo sy ho fanajana ny zony.
Raharaha Mamy Rakotoarivelo Mbola manjavozavo hatramin’izao
Niresaka fohy tamin’ny mpanao gazety omaly tolakandro ny talen’ny kabinetra eo anivon’ny minisiteran’ny filaminam-bahoaka Rabialahy Jean Rostand.
Fiarovana ny harena voajanahary Mamondron-kery ny WWF sy ny VOI
Fotoana manan-tantara ho an’I Madagasikara ny nahavitan’ny andiany voalohany tamin’ny fihaonana sy fikaonan-dohan’ireo Vondron’Olona Ifotony (VOI) eto Madagasikara tany Antsirabe n,y 16, 17, 18 novambra lasa teo. Teo ambany fiahian’ny Minisiteran’ny tontolo iainana nampian’ny WWF (World Wide Fund for Nature) izy io.
Moramanga Nanamboaran’Ambatovy tsena vaovao
Vita ary dia hotokanana rahampitso alakamisy 23 novambra ny tsenan’i Moramanga.